Fahavaratra 90-120cm milomano miaro ny tontolo iainana ary miverina miovaova akanjo baibavy zazavavy |
Ny karazana isan-karazany dia mety ho an'ny lehilahy, vehivavy ary ankizy. Ny akanjo fitondra milomano dia azo faritana amin'ny anarana isan-karazany, ny sasany amin'izy ireo dia tsy ampiasaina amin'ny toerana manokana ihany, anisan'izany ny akanjo milomano, bikini, singa iray, tapa-roa, mpiambina malaky, boaty, boaty fohy amoron-dranomasina, akanjo milomano mifaninana na vata / jammer ho an'ny lehilahy, ankoatr'izay ny hafa.
Akanjo vita amin'ny fehin-tsoroka azo ahitsy miaraka amin'ny fanokafana ny tongotra hahazoana fahalalahana bebe kokoa
Fitaovana maina sy malaso haingana, malefaka ary mora amin'ny hoditra
Akanjo mandro amin'ny zazavavy misy loko mamirapiratra sy modely mahafatifaty
Lisitry ny habe
Mahafatifaty toy ny amin'ny sary ihany io! Tian'ny zanako 3 taona ny famolavolana! Mba fantatry ny hafa fa ny haben'ny 4 dia 3-4 ary ny 5 dia 4-5. Ka raha mila 4 lehibe kokoa ianao dia mandehana amin'ny refy 5! Mety amin'ny zanako vavy izany fa nanantena aho fa ho 4 lehibe izany hampiasaina bebe kokoa!
Ny zanako vavy dia nisafidy an'ity akanjo nilomano ity izay azonay 5-6 taona izy 4 taona fa lava be ary mifanaraka tsara io ary tiany, fitaovana tsara sy vidiny lafo
Previous: Haingam-pandeha malain-driaka malaindaika 2-12 taona Fandroana ankizy ho an'ny zazavavy
Manaraka: Bikini tanora roa sombin-dehilahy mametraka akanjo milomano manomboka amin'ny 2 ka hatramin'ny 12 taona